Channel Trend Forex Ukuhweba Isu - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu we Forex Channel Trend Forex Ukuhweba Isu
Channel Trend Forex Ukuhweba Isu
Imakethe yindawo engalindelekile. Intengo ingahamba iye kunoma iluphi uhlangothi ngaphandle kwesaziso. Kwakungacika, rally, iconsi, ukuhlehla nquma nxazonke ngaphandle kwesixwayiso. Imicimbi yemakethe ingenzeka nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso. Abaphathi bamabhange amakhulu bangakhipha isitatimende noma omongameli bangaqala impi yokuhweba nge-tweet futhi lokhu kungadala umonakalo emakethe.
Imakethe ye-forex ayinakulindeleka kakhulu ngokuqhathaniswa nolunye uhlobo lwezimakethe. Lokhu kungenxa yokuthi izimali zihamba ngezizathu ezahlukahlukene. Ingahamba ngenxa yezinguquko zamazinga wenzalo, ukuma kwezomnotho oklebe noma okweqile, ingozi engozini noma engozini yemizwa, isidingo sebhizinisi noma sokuthengisa kanye nokuhlinzekwa kwemali, nokunye okuningi. Le mithombo ehlukene yokuphusha nokudonsa ngamanani emali yenza izimakethe ze-forex zibe enye yezimakethe ezingalindelekile kakhulu.
Noma kunjalo, ngaphandle kokungaqiniseki kanye nokuguquguquka kwemakethe ye-forex, kusenabathengisi abaningi be-forex abenza imali nge-forex. Laba bahwebi yibo abafunde ukwenza umqondo eshadini elibonakala lingalindelekile. Laba badayisi bayaqonda ukuthi abasoze bazi ngokuqinisekile ukuthi imakethe iya kuphi. Abangakwenza nje ukukhetha izimo zemakethe ezingabikezela kakhulu futhi zihwebe kuphela ezimakethe ezinjalo.
I-Channel Trend Forex Trading Strategy ivumela abadayisi ukuthi benze umqondo emakethe engalindelekile. Isebenzisa izinkomba ezisiza abahwebi ukubona lapho imakethe kungenzeka khona ukuthi iye khona futhi ibavumele ukuthi bahwebe ngokuzethemba.
1 Isiteshi Scalper
2 UMAMA 5 10 34 Crossover
4.3 Indlela ukufaka Channel Trend Forex Ukuhweba Isu?
I-Channel Scalper iyinkomba yezobuchwepheshe yangokwezifiso esiza abathengisi ukuthi babone ukuholwa kwenkambiso.
Kuyinkomba yokulandela mkhuba ehlelwe njengomugqa eshadini lentengo. Kwakhiwe ngaphansi kwesenzo sentengo noma nini lapho inkomba ithola ukuthambekela kwe-bullish, nangaphezulu kwesenzo sentengo noma nini lapho sithola ukuthambekela kwe-bearish. Umbala womugqa nawo uyashintsha kuye ngokuya ngakunye kwethrendi. Amathrendi we-Bullish amelwe ulayini we-orange, ngenkathi izitayela ze-bearish zimelelwa ngumugqa we-lime.
Isiteshi Scalper, yize ibizwa ngegama elifanele ukukhishwa kwesikhumba, kungasetshenziselwa ukuhweba ngosuku nokuhweba kwe-swing. Kuyinkomba eguquguqukayo engathola ukuthambekela kunoma iyiphi imakethe.
Ingasetshenziselwa izinhloso ezahlukahlukene. Isetshenziswa ngokuyinhloko njengesihlungi senkomba yokuqondisa. Abahwebi bangahlunga ukuhweba okungahambisani nethrendi nokhakhayi noma ukuhweba ngosuku emakethe kuphela ekuqondeni komkhuba. Ingasetshenziswa futhi njengesignali yokungena. Abahwebi bangathatha izinkomba kusuka enkombeni yokuthi imakethe iguqule kanjani ukuthambekela kwayo futhi bathathe ukuhweba njengokusetha okuguqula umkhuba. Okokugcina, Abadayisi bangasebenzisa futhi iChannel Scalper njengokulahleka kwesitimela okulandelwayo. Abahwebi bangalandela ukulahleka kokuma ngemuva komugqa weChannel Scalper ukuze banciphise ukubekeka engcupheni futhi bavikele inzuzo.
UMAMA 5 10 34 Crossover
UMAMA 5 10 34 I-Crossover iyinkomba yangokwezifiso enikeza amasiginali wokuhweba ngokususelwa ekuguqulweni kwemakethe.
Le nkomba isuselwa ku-Exponential Moving Average (UMAMA). Ngokuyisisekelo ihlinzeka ngezimpawu zokuhweba ngokususelwa ku-crossover ye-5-bar, 10-ibha nemigqa engu-34-bar EMA. Isibonisi bese sihlela imicibisholo ekhomba lapho kuguqulwa khona noma kunini lapho ithola i-crossover.
Leli su lihlinzeka ngamasignali wokungena oguqula umkhuba ngokuya ngokuhlangana kweChannel Scalper ne-EMA 5 10 34 Isibonisi seCrossover.
Okokuqala, inkomba ye-Channel Scalper kufanele ikhombise ukuguqulwa kwethrendi. Lokhu kuzosuselwa ekushintsheni kokushintshwa komugqa weChannel Scalper nokushintsha kombala wawo.
The EMA 5 10 34 Isibonisi seCrossover kufanele siqinisekise ukuhlehliswa kwethrendi. Kufanele-ke ukuthi icebe umcibisholo okhombe ukuqondiswa kwethrendi njengoba kukhonjisiwe yinkomba ye-Channel Scalper.
Ukuhweba bese kugcinwa kuvuliwe inqobo nje uma izinkomba zomkhuba zisasebenza. Ukulahleka kokuma kufanele kulandelwe ngemuva kwesikhombi seChannel Scalper kuze kube kumiswa ngenzuzo.
Chanel scalper (ukulungiselelwa okuzenzakalelayo)
UMAMA 5 10 34 Crossoverl (ukulungiselelwa okuzenzakalelayo)
Othandwayo Isikhathi Ozimele: 5-umzuzu, 15-umzuzu, 30-umzuzu, 1-ihora, 4-ihora namashadi nsuku zonke
Ulayini we-Channel Scalper kufanele agudluke ngaphansi kwesenzo sentengo futhi kufanele ashintshele ku-orange.
The EMA 5 10 34 Isibonisi seCrossover kufanele siphrinte umcibisholo okhombe phezulu.
Faka i-oda lokuthenga ekuhlanganeni kwale mibandela.
Setha ukulahleka kokuma ngaphansi komugqa wesiteshi iScalper.
Ukulandelela ukulahleka kokuma ngaphansi komugqa weChannel Scalper kuze kube yilapho kumiswa ngenzuzo.
Ulayini we-Channel Scalper kufanele agudluke ngaphezu kwesenzo sentengo futhi kufanele ashintshe abe umcako.
The EMA 5 10 34 Isibonisi seCrossover kufanele siphrinte umcibisholo okhombe phansi.
Faka i-oda lokuthengisa ekuhlanganeni kwale mibandela.
Setha ukulahleka kokuma ngaphezu komugqa we-Channel Scalper.
Ukulandelela ukulahleka kokuma ngaphezu komugqa weChannel Scalper kuze kube yilapho kumiswa ngenzuzo.
Lelisu lokuhweba luhlobo oluphezulu lwesivuno lwesu lokuhweba. Kungahle kube nokulahleka okuthile okungenzeka ngezikhathi ezithile ikakhulukazi uma kusetshenziswa endaweni emakethe engaconsi phansi. Noma kunjalo, isinkwa saleli qhinga nebhotela kusilinganiso sengozi yaso.
Lelisu lingaveza ukuhweba okunemikhiqizo ephezulu uma kuqhathaniswa nobungozi obubekwe kwezohwebo. Lokhu kungenxa yokuthi ukuhweba kugcinwa kuvulekile inqobo nje uma ukuthambekela kusasebenza. Ngaphezulu kwalokho kulahleka kwesitimela kuyalandelwa lapho umugqa weChannel Scalper uhamba. Lokhu kunciphisa kakhulu ukulahleka futhi kuthuthukisa ngokumangazayo isilinganiso sengozi yomvuzo njengoba ukuhweba kuthuthuka.
I-Channel Trend Forex Trading Strategy iyinhlanganisela yeMetatrader 4 (MT4) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
I-Channel Trend Forex Trading Strategy inikeza ithuba lokuthola izici ezahlukahlukene namaphethini kumanani wamanani angabonakali ngeso lenyama..
Indlela ukufaka Channel Trend Forex Ukuhweba Isu?
Thwebula Channel Trend Forex Ukuhweba Isu.zip
Iya kwesokudla ukukhetha iShanel Trend Forex Trading Strategy
Uzobona iShanel Trend Forex Trading Strategy iyatholakala kwi Ishadi yakho
Isiqephu esedluleI-Alpha Trend Spotter PA Inkomba ye-MT4
Isihloko esilandelayoRSI Oscillator Histo MT5 Inkomba